Mae Pay Soh Elections API - Tara Vote
Application Type : Android
Developed By Tara Aung Co., Ltd
Tara Vote App ဟာဆိုရင် လာမဲ့ Nov 8 မှာကျရောက်မယ့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးအတွက် မဲပေးမယ့်သူတွေရယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်အချက်အလက်များကိုအလွယ်တကူရှာဖွေရရှိမျှဝေနိုင်တဲ့ Android Mobile App ဖြစ်ပါတယ်။
လာမဲ့Nov8မှာကျရောက်မယ့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးဟာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်အရမ်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအထူးပြောစရာမရှိပါဘူး။ ပြည်သူပြည်သားတွေမှာအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ Tara Aung ကုမ္ပဏီကလည်းတတ်နိုင်တဲ့ technical အပိုင်းကနေ ဒီTara Vote Information App နဲ့အများသူတွေ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်တဲ့ ပါတီစာရင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်း၊ မဲစာရင်း၊ မဲဆန္ဒနယ်တွေ၊လက်ရှိအမတ်စာရင်းအမေးအဖြေတွေ၊ပယ်မဲ၊ခိုင်လုံမဲ စတဲ့အချက်အလက်တွေကို အလွယ်တကူသိရှိအောင်၊ အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်အောင်၊ မျှဝေနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ကွယ်မှအချက်အလက်တွေအတွက် မဲပေးစို့ API ကိုအဓိကသုံးပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်(UEC) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ကွန်ယက်(MERIN)တို့ကနေအချက်အလက်တွေယူထားပါတယ်
Tara Vote Appရဲ့ မဲစစ်တမ်းမှာပါဝင်ပြီး ကိုယ်ထောက်ခံတဲ့ ပါတီကို အားပေးနိုင်ပါတယ်။ မဲစစ်တမ်းအားလုံး ဘယ်လောက်ပေးထားပြီးပြီလဲ ဘယ်ပါတီဘယ်လောက်ရလဲအချိန်နှင့် တပြေးညီကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ပါတီအချက်အလက်ကနေ ပါတီခေါင်းဆောင်တွေ ဝင်ပြိုင်ထားရင် ကြည့်နိုင်အောင် Link ပေးထားပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းတွေကို ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေကို Google Map နဲ့ပြထားတဲ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်က ကိုယ်စားလှယ်အကြောင်းတွေသာမက မဲဆန္ဒနယ်မြေပုံကိုပါလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ GPS ဖွင့်ထားပြီး လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအကြောင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
လက်ရှိလွှတ်တော်အမတ်စာရင်းကို တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ၁၄ခု ခွဲပြထားပြီး လွှတ်တော်အတွင်းသူတို့ရဲ့ မေးခွန်းတွေ အဆိုပြုချက်တွေကို ဖတ်ရှူနိုင်ပါတယ်။
မဲစာရင်းမှာ ပါမပါစစ်နိုင်ပြီး ရှာရလွယ်ကူအောင် အချက်အလက်တွေပေးထားပါတယ်။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို နာမည်နှင့် အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
ရှာဖွေထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်၊ပါတီ၊မဲစာရင်း၊ မဲစာရင်းစစ်တမ်းရလာဒ်တွေကို Viber,Email,SMS အစရှိတွေနဲ့Share လ.ိုရပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ဆိုင်သောမေး ခွန်းများ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
ထို့အပြင် မဲပေးနေ့လမ်းညွန်ကိုလည်း အဆင့်ဆင့်ဖြင့်
Tara Vote ဖြင့် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုဆန်းစစ်လေ့လာကြရအောင်!
Tara Aung ကုမ္ပဏီ မှဂုဏ်ယူစွာဖြင့်ဖန်တီးရေးသားသည်။ [zawgyi]
Tara Vote App ဟာဆိုရငျ လာမဲ့ Nov 8 မှာကရြောကျမယျ့ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကွီးအတှကျ မဲပေးမယျ့သူတှရေယျ၊ ရှေးကောကျပှဲကွီးကိုစိတျဎငျစားတဲ့ပွညျသူတှအေားလုံးအတှကျအခကျြအလကျမြားကို
အလှယျတကူရှာဖှရေရှိမြှဝနေိုငျတဲ့ Android Mobile App ဖွဈပါတယျ။
လာမဲ့ Nov 8 မှာကရြောကျမယျ့ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကွီးဟာ မွနျမာပွညျသူပွညျသားတှအေတှကျအရမျးအရေးကွီးတယျ
ပွညျသူပွညျသားတှမှောအပါအဝငျဖွဈတဲ့ Tara Aung Company ကလညျး တတျနိုငျတဲ့ technical အပိုငျးကနေ ဒီTara Vote Information App နဲ့အမြားသူတှေ ရှေးကောကျပှဲနှငျ့ပတျသကျတဲ့ ပါတီစာရငျး၊ ကိုယျစားလှယျလောငျးစာရငျး၊ မဲစာရငျး၊ မဲဆနဒနယျတှေ၊လကျရှိအမတျစာရငျးအမေးအဖွတှေေ၊ပယျမဲ၊ခိုငျလုံမဲ စတဲ့အခကျြအလကျတှကေို အလှယျတကူသိရှိအောငျ၊ အလှယျတကူရှာဖှနေိုငျအောငျ၊ မြှဝနေိုငျအောငျ ဖနျတီးပေးရခွငျးဖွဈပါတယျ။
နောကျကှယျမှအခကျြအလကျတှအေတှကျ မဲပေးစို့ APIကိုအဓိကသုံးပွီး ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ(UEC) နှငျ့ မွနျမာနိုငျငံရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ သတငျးအခကျြအလကျကှနျယကျ(MERIN)တို့ကနအေခကျြအလကျတှယေူထားပါတယျ
Tara Vote Appရဲ့ မဲစဈတမျးမှာပါဝငျပွီး ကိုယျထောကျခံတဲ့ ပါတီကို အားပေးနိုငျပါတယျ။
မဲစဈတမျးအားလုံး ဘယျလောကျပေးထားပွီးပွီလဲ ဘယျပါတီဘယျလောကျရလဲအခြိနျနှငျ့ တပွေးညီကွညျ့နိုငျပါတယျ။
ပါတီအခကျြအလကျကနေ ပါတီခေါငျးဆောငျတှေ ဝငျပွိုငျထားရငျ ကွညျ့နိုငျအောငျ Link ပေးထားပါတယျ။
မဲဆန်ဒနယျမွတှေကေို Google Map နဲ့ပွထားတဲ့အတှကျ သကျဆိုငျရာ မဲဆန်ဒနယျမွကေ ကိုယျစားလှယျအကွောငျးတှသောမက မဲဆန်ဒနယျမွပေုံကိုပါလလေ့ာနိုငျပါတယျ။
GPS ဖှငျ့ထားပွီး လကျရှိရောကျနတေဲ့နရောက ကိုယျစားလှယျလောငျးတှအေကွောငျးကွညျ့နိုငျပါတယျ။
လကျရှိလှတျတျောအမတျစာရငျးကို တိုငျးနဲ့ပွညျနယျ ၁၄ခု ခှဲပွထားပွီး လှတျတျောအတှငျးသူတို့ရဲ့ မေးခှနျးတှေ အဆိုပွုခကျြတှကေို ဖတျရှုနိုငျပါတယျ။
မဲစာရငျးမှာ ပါမပါစဈနိုငျပွီး ရှာရလှယျကူအောငျ အခကျြအလကျတှပေေးထားပါတယျ။
ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားကို နာမညျနှငျ့ အလှယျတကူ ရှာဖှနေိုငျပါသညျ။
ရှာဖှထေားတဲ့ ကိုယျစားလှယျ၊ပါတီ၊မဲစာရငျး၊ မဲစာရငျးစဈတမျးရလာဒျတှကေို Viber,Email,SMS အစရှိတှနေဲ့Share လို့ရပါတယျ။
ထို့အပွငျ မဲပေးနလေ့မျးညှနျကိုလညျး အဆငျ့ဆငျ့ဖွငျ့ ရှငျးလငျးထညျ့သှငျးထားသညျ။
Tara Vote ဖွငျ့ ၂၀၁၅ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကိုဆနျးစဈလလေ့ာကွ ရအောငျ!
Tara Aung ကုမ်ပဏီ မှဂုဏျယူစှာဖွငျ့ဖနျတီးရေးသားသညျ။[Unicode]
Let's find out information about 2015 Myanmar general election with Tara Vote.
You can find out about party list, candidate list, guide for polling day, check voter list, my current location constituency,
election news, FAQs, current MP list
& take part in Tara Vote election poll and show your support!
Proudly presented by Tara Aung Company.